Layma's World: လူသား ဘ၀
၄။ စင်္ကာပူ.. ဘန်ကောက် … ကိုရီးယား.. ( မဲဆောက်... တကာပေါ်လို့ထပ်ဖြည့်သည် ) ကို shopping ထွက်ချင်တယ်… ။ ဂျပန် နဲ့ရုရှား မှာ လျှောက်လည်ချင်တယ်…။ ( ဘလော့ဂ်ဂါ သူငယ်ချင်းတွေက အစားအသောက်နဲ့ကြိုဆိုကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားတယ်…။)
လူသား မှန်ရင် ... လူပီသရမယ်.. လူသားဆန်တဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်ရမယ်.. (ဒါပေမယ့် တိရစ္ဆာန်တွေကို အတုယူသင့်တဲ့ နေရာမှာလည်း အတုယူဖို့ လိုအပ်တယ်...။)
ဘ၀ မှန်ရင် ... ရုန်းကန် လှုပ်ရှားနေရမယ်... ငြိမ်သက်မနေရဘူး...။
လူသားဘ၀ ဆိုတာ ... ဘာသာရေး..ပတ်ဝန်းကျင်... အသိတရား.. လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ လွှမ်းမိုး တိုက်တွန်းမှုမပါဘဲ ... ကိုယ်စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ အလုပ်.. အနည်းဆုံး တစ်ခုလောက်တော့ ကျေကျေနပ်နပ် နောင်တမရဘဲ လုပ်လိုက်နိုင်ရင် အဓိပ္ပါယ် ရှိလိမ့်မယ် ...။
လူဖြစ်ရတာ တန်အောင် တွင်းအောင်း ဂျယ်ရီ နဲ့ညီမငယ် ဝေလေး က ဘာတွေ လုပ်သွားမလဲ ဆိုတာ မျှဝေစေချင်ပါတယ်…။ အဆင်ပြေရင်ပြောကြပါဦး..။<-->
Posted by lay-ma at 3:36 AM
Labels: personal, Tag, That's what I wanna say
အယ်....ဘန်ကောက်ကိုပဲ လာမှာလားး သားကြွက်တို့မဲဆောက်လည်း စည်ပါတယ်ဗျ လာလည်လေ ဆရာ နဲ့ကျနော် ကောင်းကင်ကြီးကို ဘီယာ မူးအောင်တိုက်ပေးမယ် :P တီကြွက် အတွက်တော့ သောင်ရင်းမြစ်ထဲက ငါးကြီးကြီးတစ်ကောင် ဆင်းဖမ်းပေးမယ် :)
“စာရေးချင်တယ်… စာရေးဆရာ မဖြစ်ချင်ဘူး..”
အဲဒီ စကားကိုတော့ သိပ်ကြိုက်တယ်ဗျာ.. “အလုပ်တွေ အရမ်းလုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် သူဌေးဖြစ်ချင်လို့ မဟုတ်ဘူး” ဆိုတာမျိုးနဲ့ များ ယှဉ်ပြီး စဉ်းစားကြည့်လို့ရမလား.. ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ လူတိုင်းက ကိုယ့်ရဲ့ “အလုပ်” တစ်ခုအတွက်၊ “ပြီးမြောက်မှု” ဒါမှ မဟုတ်ရင် အကျိုးသက်ရောက်မှု တစ်ခုကို ပြန်ရချင်ကြတဲ့ သူတွေပဲလေ.
ဆိုလိုတာကတော့ဗျာ. “စာရေးချင်တယ်… စာရေးဆရာ မဖြစ်ချင်ဘူး..” ဆိုတာဟာ အတ္တမကြီးတဲ့ သူတွေ ထားနိုင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးပေါ့... (တစ်ဖက်က စဉ်းစားကြည့်ရင် လွတ်လပ်စွာ နေရခြင်းကို ကြိုက်တာလို့လည်း ပြောလို့ရမယ် ထင်တယ်. )
ဘ၀နဲ့ ပတ်သက်လို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်သာအောင် ရေးတတ် ပါပေတယ်ဗျာ... အတွေး စတွေ ဖြန့်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ အစ်မ.ရေ.. :)
ပြီးတော့ ဒီလို လူမျိုးတွေဆီက ဒီလို ယူဆချက်တွေ ကိုသိခွင့်ရအောင် အစဖော်ပေးတဲ့ ကိုသင်္ကြန်ကြီးကိုလည်း ကျေးဇူး အထူးပါ။ :D
အရမ်းကောင်းတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပဲဗျာ။ ကျွန်တော့်အတွက် လူဖြစ်ရ တန်အောင် ဆိုတဲ့ လုပ်သွားချင်တဲ့ ဆန္ဒ တွေပဲ ရှိတယ် လေးမလို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အတွေး မပေါက်သေးဘူး။ လေးမဖွင့်ဆိုချက်ကို အမြင်ခြင်းလဲတူပါတယ် ကျေးဇူးလဲအထူးတင်ပါတယ်။
နဲ့ ကိုပြည့်စုံနေပါပီ.. :)
(ဘလော့ဂ်ဂါ သူငယ်ချင်းတွေက အစားအသောက်နဲ့ကြိုဆိုကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားတယ်…။) တဲ့ :)
ကြည်နူးစရာပဲဗျ အတွေးတွေက လတ်ဆတ်နေတယ်..... စိတ်ကူးထဲမှာ ဒုက္ခပေးမယ့်သူတွေလဲထဲ့ထားတယ်နော်.. ခွေးအကြီးစားသုံးကောင် ဆိုလို့ နည်းနည်းလန့်သွားတယ်.. ဘယ်နားကများထွက်လာမလဲလို့...
အတွေးတွေကို နှိုးဆွပေးတဲ့ ကိုသင်္ကြန်နဲ့ မမကိုပါကျေးဇူးတင်ရမှာ
ထုံးစံအတိုင်း မမဆီလာလည်ပြီး အတွေးတွေနဲ့ ပတ်ချာလည်ပြန်ပြီ
မိသားစုဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်နေမှုပေါ်မှာရော မမရဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှု မျှော်လင့်ချက် ခံယူချက်ကဘာလဲ သိချင်တယ်
စကားမစပ် shopping ထွက်ရင် ခေါ်ဦးလေ။ ခေါ်မယ်ဟုတ်
စကားမစပ်...shopping ထွက်ရင်ထော်နော်။ ချန်မထားနဲ့ဦး။
လေးမ....နောက်ဆို မြစ်ဆုံ က ဘာလို့ မရှိတော့မှာ လဲဗျ....တိမ်ကောသွားလို့လား.....ခွေးတော့ မွေးချင်သား....ခြံနဲ့ နေနိုင်မှပဲ မွေးနိုင်တော့မှာ......ပြောရင်းဆိုရင်း မြီးတို ဆိုတဲ့ ခွေးမလေးကိုသတိရလာပြီ
ဗျာ....ကျောင်းတက်တုန်းက ခြောက်လသမီးလေး.....ခုတော့ဆုံးသွားရှာပါပြီ.....ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ် ပတပ်ရပ်ရပ် ပြီးတက်တာ....အင်္ကျီ မှာ သူ့ ခြေရာလေးတွေထင်လို့.......မွေးရာပါ အမြီးမပါဘူးဗျ....သမီးလေးက.....
လေးမပြောထားမှပဲ အမလည်း ပြန်တွေးလိုက်ဦးမယ်.. အခုတော့ ညီမလေးရဲ့ လူသားဘ၀အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားချက်ကို ပိုကြိုက်တယ်။ မြစ်ဆုံက ဘာလို့မရှိတော့မှာတဲ့လဲ။ အမလည်း အဲဒီကို ရောက်ဖူးချင်နေတာ.. ဂျပန်လာလည်မယ်ဆို always welcome ပါနော်..အဲ အမ ရှိတုန်းလာပေါ့နော်.. :)
July 17, 2008 at 5:39 AM
မီကတော့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတောင် ဘာမှန်း မသိသေးဘူး. . ဖြည်းဖြည်းပဲ ရွေ့ နေတယ်။
အစ်မရဲ. လူသားဘ၀ကို သေချာဖတ်သွားပါတယ်။
ခွေးသေးသေးလေး နဲ့ ချစ်စရာလေးတွေ မွေးချင်တယ်
လူသားဘ၀ကို လူသားဆန်ဆန်ပဲ ဖြတ်သန်းချင်တယ်။
ဘ၀ မှန်ရင် … ရုန်းကန် လှုပ်ရှားနေရမယ်… ငြိမ်သက်မနေရဘူး အဲဒီစကားလေးကို အနှစ်သက်ဆုံးပဲ တိုက်ဆိုင်မှုရှိတယ်လို့ ဆိုရမလိုပဲ ၊ ဘယ်အကြောင်းအရာကိုရေးရေး အစ်မအရေးအသားတွေ အရမ်းကောင်းတယ်ဗျ ၊ လာလည်မယ်ဆိုရင် အစားအသောက်တွေနဲ့ဧည့်ခံရုံတင်မကပါဘူး လည်ပတ်ချင်တဲ့ နေရာတွေ ကို လိုက်ပို့ပေးမယ်လေ ။
စိတ်ကူးတွေက အားကျစရာပဲ အမရေ။
လာလည်ရင် အစားနဲ့ ကြိုမကြိုတော့ မသေချာဘူး အသောက်နဲ့တော့ ကြိုပေးမယ် :D
>သားကြွက် ... လေးမ ငါးမစားဘူး..။
>မှော်ဆရာ .. ပြောတာမှန်တယ်..။ လွတ်လပ်စွာ နေရခြင်းကို ကြိုက်တာ ..။ စာရေးဆရာ လုပ်ရတာ တာဝန်ကြီးတယ်..။
>ဝေလေး.. တွေးလည်းတွေး .. ရေးလည်း ရေးပေးတာ ကျေးဇူး..။
>ကိုအတာ.. နောက်ဆို မပေါက်သေးတာ ရှိရင် လေးမကို ပြောပါ.. ။ ဖောက်ပေးမယ်.. အဲလေ.. အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပေးမယ်..။ ဟိ..ဟိ..။
>စိုးမိုးလေး.. သိမှာပါ... သိပါတယ်... သိနေတယ်နော..။
>ညိမ်းညို ... နောက်မှ လခမထုတ်ရသေးလို့အစ်မရယ်လို့မပြောနဲ့ ..။
>ကိုပြခန်း.. အဟဲ.. ထမင်းလာမစားရဲအောင်... ဒီလို ပဲ ဖိန့်် ထားရတာ.. ။
>မွန် ...... ခုချိန်ထိ မသေချာသေးဘူး.. ညီမ..
လောလောဆယ်တော့ ... အင်း မွန်ရယ်... ပို့ စ်တစ်ပုဒ် ရေးပြပါ့မယ်..။
>ခေးရော့စ်.. ခေါ်မှာပေါ့.. ပီကေမပါကြေးနော်... ပီကေ၀ါးပြီး ရှော့ပင်းမထွက်နဲ့လို့ ပြောတာပါ...။
>ကိုညိုထက်.. မြစ်ဆုံမှာ တမံဆောက်တော့မှာ.. တဲ့..။ သံယောဇဉ်ဆိုတာ နည်းလေကောင်းလေပါ...။
>မနုစံ... အပေါ်မှာ ဖြေထားတယ်နော်... မ.. ရှိတဲ့ နေရာ လာလည်မယ်..။
>မီ.. တစ်ခါတစ်လေ သိတယ်ထင်ပေမယ့် မသိဘူး.. မသိသလိုနဲ့ လည်း သိတာတွေ ရှိတယ်.. ဘာပဲပြောပြော ရွေ့ နေတယ်ဆိုတော့ တနေရာတော့ ရောက်မှာပေါ့...။
>မိ.. နင်ပြောတာကို ငါ.. ကျေနပ်ခဲ့ပေမယ့် ... အဲဒီအတွက် လူဖြစ်ရတာတန်တယ်လို့ငါပြောမိရင် ငါ့ကိုယ်ငါ ထရိုက်မိလိမ့်မယ်..။ :P
>sparrow... စာကလေးရော .. လူဖြစ်ရတာ တန်ပြီလား..။
>နှင်းပွင့်ဖြူလေး.. အဖြစ်သင့်ဆုံးပါပဲ.. ညီမ..။
>တင့်ထူး.. ဟဲ.. ဟဲ.. တကာ ပေါ်ပြီ.. ဒကာပေါ်ပြီ...။
>၃၀၅.. အိပ်မက်ဆိုးတွေ ရပ်ပါစေ..။
>မျှားပြာ ... :)
>ကျန်စစ်.. ရေ ပဲ တိုက်မယ်လို့ဆိုလိုတာလား... သိပါတယ်.. သူတောင် ပိုက်ပိုက်မရှိလို့သူများဆီ ကပ်သုံးနေရတာဆိုတော့ ... သဘောပေါက်ပါတယ်..။
MyMyanmar ကို တစ်စစီဆွဲဆုပ်ခြင်း